ဘာသာစကား ၂၄ ခုအတွက် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါင်း ၁၁၈၃၅၇ နှင့်အထက် ရှိပါသည်။
မြန်မာဝစ်ရှင်နရီက ကြိုဆိုပါ၏။ မြန်မာဝစ်ရှင်နရီသည် စကားမျိုးစုံ၏ အဓိပ္ပာယ်တို့ကို မြန်မာစာဖြင့် ဖေါ်ပြနေသော အများပူးပေါင်း ပါဝင်ပြုစု ပျိုးထောင်နေသော မွန်မြတ်သော လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အများအတွက် ပိုမို အသုံးဝင် အကျိုးရှိသော အွန်လိုင်းအဘိဓာန် တစ်ခု ဖြစ်အောင် မည်သူမဆို ပါဝင် ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ကြပါသည်။
ဝစ်ရှင်နရီသည် ဝီကီ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး သင်သည်လည်း ပါဝင်တည်းဖြတ် ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ပါဝင်အကြောင်းအရာများအားလုံးကို Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported လိုင်စင် နှင့် GNU Free Documentation လိုင်စင် နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ယူနီကုဒ်စည်းမျဉ်းနှင့်ညီသော မည်သည့်ဖောင့်နှင့်မဆို ရေးသားခြင်း တည်းဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အထွေထွေဆွေးနွေးရန်နှင့် မေးမြန်းရန်နေရာတို့တွင်လည်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Welcome to Myanmar Wiktionary,acollaborative project to produceafree-content multilingual dictionary in Burmese Language. Learn how to startapage, experiment in the sandbox and and visit our Community Portal to see how you can participate in the development of Myanmar Wiktionary. This Wiktionary uses Unicode standard.
ယနေ့ အထူးစကားလုံး ဒီမှာဖတ်။
မင်း၊ အစိုးရ၊ အကြီးအကဲစသည် ထင်ရှားရှိချိန်ကို အမှတ်အသားပြု၍ ပိုင်းခြားသောကာလ။
ကကုသန်ဘုရားလက်ထက် ရတနာပုရသုနာပရန္တဟူ၍ လည်းကောင်း။ ပလိပ်။ နိဒါန်း။
ဝီကီရေးသူ အသစ်များအတွက် အကူအညီ စာမျက်နှာများ။
လင့်ပေါင်းချုပ် • မသိရင်မေး • မူဝါဒ
ဤသည်မှာ မြန်မာဘာသာစကား ဝစ်ရှင်နရီဖြစ်ကာ အခြားဘာသာစကားများအား မြန်မာဘာသာဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ နမူနာအားဖြင့် ပြင်သစ်စကားလုံး dictionnaire ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ကြည့်ပါ။ ထိုစကားလုံး၏ ပြင်သစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား ရှာဖွေရန်အတွက် ပြင်သစ်ဝစ်ရှင်နရီရှိ သက်ဆိုင်ရာ စာမျက်နှာသို့ သွားပါ။
ဖွင့်ဆိုချက်ပေါင်း ၁,၀၀၀,၀၀၀+ English (အင်္ဂလိပ်) • Français (ပြင်သစ်) • Malagasy
၁၀၀,၀၀၀+: Հայերեն (အာမေးနီးယား) • Català (ကတ်တလန်) • 中文 (တရုတ်) • Nederlands (ဒတ်ချ်) • Suomi (ဖင်လန်) • Deutsch (ဂျာမန်) • Ελληνικά (ဂရိ) • Español (စပိန်) • Eesti (အက်စတိုးနီးယား) • Magyar (ဟန်ဂေရီ) • Ido • Bahasa Indonesia (အင်ဒိုနီးရှား) • Italiano (အီတလီ) • 日本語 (ဂျပန်) • ಕನ್ನಡ (Kannada) • 한국어 (ကိုရီးယား) • Kurdî / كوردی (Kurdish) • Lietuvių (လစ်သူရေးနီးယား) • മലയാളം (Malayalam) • Norsk Bokmål (နော်ဝေ) • ଓଡ଼ିଆ (Oriya) • Polski (ပိုလန်) • Português (ပေါ်တူဂီ) • Română (ရိုမေးနီးယား) • Русский (ရုရှား) • Srpskohrvatski (Serbo-Croatian) • Svenska (ဆွီဒင်) • தமிழ் (တမီးလ်) • తెలుగు (Telugu) • ไทย (ထိုင်း) • Türkçe (တူရကီ) • Tiếng Việt (ဗီယက်နမ်) • Oʻzbekcha / Ўзбекча (ဥဇဘက်)
၁၀,၀၀၀+: အာဖရိက • العربية (အာရပ်) • Asturianu (Asturian) • Azərbaycan (Azeri) • Euskara (Basque) • Brezhoneg (Breton) • Български (ဘူဂေးရီးယား) • Hrvatski (ခရိုရေးရှား) • Český (ချက်ဇ်) • Dansk (Danish) • Esperanto • Frysk (West Frisian) • Galego (Galician) • עברית (ဟီဘရူး) • हिन्दी (ဟင်ဒီ) • Íslenska (အိုက်စလန်) • Basa Jawa (Javanese) • ລາວ (လာအို) • Latina (လက်တင်) • Limburgs (Limburgish) • Bân-lâm-gú (Min Nan) • Nynorsk (နော်ဝေ) • Occitan • پښتو (Pashto) • فارسى (ပါရှား) • Српски (ဆားဗီးယား) • Sicilianu (Sicilian) • Simple English • Slovenčina (ဆလိုဗက်) • Kiswahili (Swahili) • Tagalog • Українська (ယူကရိန်း) • اردو (အူရဒူ) • Volapük • Walon (Walloon) • Cymraeg (Welsh)
၁,၀၀၀+: Shqip (အယ်လ်ဘေးနီးယား) • Беларуская (ဘယ်လာရုဇ်) • বাংলা (ဘင်ဂါလီ) • Bosanski (ဘော့စနီးယား) • Corsu (Corsican) • ქართული (ဂျော်ဂျီယာ) • Kalaallisut (ဂရင်းလန်) • Avañe'ẽ (Guaraní) • Interlingua • Gaeilge (အိုင်ယာလန်) • Kaszëbsczi (Kashubian) • қазақша (Kazakh) • ភាសាខ្មែរ (ခမာ) • Кыргызча (ကာဂျစ္စတန်) • Latviešu (Latvian) • Lëtzebuergesch (လူဇင်ဘက်) • Plattdüütsch (Low Saxon) • Македонски (မက်စီဒိုးနီးယား) • Bahasa Melayu (မလေး) • Malti (Maltese) • मराठी (Marathi) • Nahuatl • Ænglisc (Old English) • Gàidhlig (Scottish Gaelic) • سنڌي (Sindhi) • සිංහල (Sinhalese) • Slovenščina (Slovene) • Soomaaliga (ဆိုမာလီ) • Hornjoserbsce (Upper Sorbian) • seSotho (Southern Sotho) • Тоҷикӣ (Tajik) • Tatarça / Татарча (တာတာ) • تركمن / Туркмен (Turkmen) • Uyghurche / ئۇيغۇرچە (Uyghur) • پنجابی (Western Punjabi) • Wollof (Wolof)
၁၀၀+: አማርኛ (Amharic) • Aragonés (Aragonese) • Armãneashce (Aromanian) • ᏣᎳᎩ (Cherokee) • Kernewek / Karnuack (Cornish) • ދިވެހިބަސް (Divehi) • Føroyskt (Faroese) • ગુજરાતી (Gujarati) • Hausa / هَوُسَ (Hausa) • Interlingue • ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (Inuktitut) • Ikinyarwanda (Kinyarwanda) • Lingala • Māori • Gaelg (Manx) • Монгол (မွန်ဂိုးလီးယား) • नेपाली (နီပေါ) • Oromoo (Oromo) • ਪੰਜਾਬੀ (ပန်ဂျာပီ) • Runa Simi (Quechua) • Gagana Samoa (ဆမိုးအား) • Sängö • Basa Sunda (Sundanese) • ትግርኛ (Tigrinya) • Tok Pisin • Xitsonga (Tsonga) • ייִדיש (Yiddish) • Vahcuengh (Zhuang) • isiZulu (ဇူးလူး)
မေတာမှ စာရင်း + ဝစ်ရှင်နရီအားလုံး
ဝစ်ရှင်နာရီကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖလောရီဒါပြည်နယ်အခြေစိုက် အကျိုးအမြတ်မယူသည့် ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း က လွှင့်တင်ထားပါသည်။ ဝီကီမီဒီယာ၏ အခြားသော ညီအစ်မပရောဂျက်များမှာ -
အခမဲ့ လွတ်လပ် စွယ်စုံကျမ်း